Home » အသားပေး » Mocap Unshackling: မဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြိုးမဲ့ Go
Mocap Unshackling: မဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြိုးမဲ့ Go
စံချိန်, မော်နီတာနှင့် သုံးသပ်ကြည့်ရှု အနီးအနားမှာမဆိုဟာ့ဒ်ဝဲမရှိဘဲအစွန်းရောက်အခြေအနေများအတွက်ခလုတ်တစ်ခု၏ထိတွေ့မှာလှုပ်ရှားမှုတွေ, ။
motion-ဖမ်းနည်းပညာ ... ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများတွင်အနီးသို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်နှင့်လည်းအစွန်းရောက်အားကစားအတွက်ကြီးမားတဲ့လှိုင်းတံပိုးဖြစ်စေစတင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူထဲကအများဆုံးရနိုင်မလဲ?
, သင့်ဝတ်စုံ Choose ကျားကန်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူသတ်မှတ်ထား.
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်နီးပါးမည်သည့်အခြေအနေအရေးယူ-ထုပ်ပိုးလှုပ်ရှားမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ယခုဖြစ်နိုင်သောင်; ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစားကနေ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း position နဲ့ဆက်ဆံဖို့။
Xsens အနီးအနားရှိကွန်ပျူတာများ, ကင်မရာများနှင့်အခြားလေးလံသော-တာဝန်ပစ္စည်းကိရိယာများဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, On-ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်-ခန္ဓာကိုယ်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုတိုက်ရိုက်ရွေ့လျားမှုဒေတာသိုလှောင်နိုင်သောမှတ်တမ်းတင် pack ကိုအာရုံခံကိရိယာမိတ်ဆက်ပါပြီ။ ဒီအားသာချက်ကိုယူပါ။ အစားကွာဟချက်အတွက်ဖြည့်စွက်ရန် postproduction တည်းဖြတ်ဖို့လှည့်ခြင်းထက်သင့်လျော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
ဟိန်း Beute, Xsens မှာကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်: "ဥပမာအားဖြင့်, သင်ကအပြေးပြိုင်ပွဲရဲ့ start ကနေအဆုံးမှတစ်ဦး Motocross မြင်းစီးသူရဲရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖမ်းယူနိုင်, သင်တစ်ဦးလက်ပေါ်အလုပ်အကိုင် lumberjacking တူသောအပေါ် Ergonomics ဖျော်ဖြေနေလျှင်သို့မဟုတ်ယင်းဘာသာရပ်အနီးအနားရှိပါဝါအရင်းအမြစ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲနက်ရှိုင်းသောတောအုပ်၌အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ MVN Studios က 4.4 ယခင်ကထက် mocap ပိုပြီးလက်လှမ်းစေသည်။ "
မလွှဲမရှောင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော kinetic ဂရပ်များ၏နာရီမှတဆင့် sifting အချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်အရာ, သင်တို့၏ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူပိုင်ဆိုင်မှုအမည်တစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်း system ကို Define ။ သငျသညျ key ကိုဒေတာမြှပ်ထားမှုကြောင့်တစ်ခုခုလိုခငျြ: အမည်များကိုတစ်ဦးအခင်းဖြစ်ပွားရာ၏အရိပ်အယောင်, ဇာတ်ကောင်, အရေးယူ, တစ်ယူနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။
တတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောအဖြစ် data ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပိုအချိန်ကိုယူပါ။
တစ်ဦး optical သို့မဟုတ်သံလိုက်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, နှောင့်အယှက်ကအမြဲဖြစ်နိုင်နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအစဉ်အမြဲယူရပါမည်။ optical စနစ်များအဘို့, ဒီအာကာသနှင့်သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးစလုံး၏တိကျခိုင်မာစွာစံကိုက်ညှိဆိုလို။ ရလဒ်ပိုကောင်း, သံလိုက်ဆူညံသံ၏အာကာသသံလိုက်စနစ်များအဘို့, ပိုမိုလွတ်လပ်သော။
ဖြစ်စဉ်အများအပြားခြေလှမ်းများ automated နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ဆူညံသံလှုပ်ရှားမှုများကိုသို့မဟုတ်လဲလှယ်ရေးပထမဦးဆုံးလက်စစ်ဆေးနေစောစောပိုက်လိုင်းအများအပြားဆက်ကြောင်းကိုဖမ်းပါလိမ့်မယ်။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်အထူးသဖြင့်ဆူညံဖြစ်လျှင်, filter များဒေတာတိုးတက်လာဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အကျွံအသုံးပြုခဲ့လျှင်ထိုလှုပ်ရှားမှုကိုလြော့နိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ထိုသို့ဖိုင်ကိုတင်ပို့ရှေ့မှာမလတ်ဆတ်ကြည့်ဘို့တစ်စုံတစ်ဦးပေါ်သို့ file ကိုသွားကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။
တစ်ဦးနှေးကွေးမြန်နှုန်းမှာလှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ဖွင့်လည်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။ မကြာသေးမီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအသုံးပြုခြင်း, ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုပင်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများမှအစုပေါ်မှာဤလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး photoreal အနာဂတ်ရောက်ရှိ
ထို့နောက်တစ်ဦး CGI ဇာတ်ကောင်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုလျှောက်ထားတစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘာသာရပ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဖမ်းယူခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ချက်ချင်းရိုးရာကီးကာတွန်းမှာတွေ့ရတဲ့ဆက်ကြောင်းများစွာကိုဖယ်ရှားပစ်။ motion ဖမ်းယူယခုအင်အားကြီးမြောက်မြားစွာ High-end, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ်ဍာကဲ့သို့သော avatar, Final Fantasy XV နှင့် ဖီဖာ။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်း၏ photoreal, ပြောင်းလဲနေသောအရေးယူဘို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်။
တကယ်တော့, Xsens လက်ရှိမျှော်မှန်းခေါင်းစဉ်များအတွက် mocap ဟာ့ဒ်ဝဲပေးနေကြတယ် နေသော်လည်း, နှင့် Hellblade။ On-ခန္ဓာကိုယ်ယခုရရှိနိုင်မှတ်တမ်းတင်မှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမသံသယသင်သည်မကြာမီရုပ်ရှင် athleticism ပင်တစ် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ , အစစ်လားထင်ရတဲ့လူ့ Simulator များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွန်းအားပေးနှင့်အတူရွေ့လျားဖမ်းယူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့အရင်ကထက်ပိုပြီးမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ယခင်: ဆယ်ကျော်သက် Professional ကကားပြိုင်ကားသမား Devin O'Connell TVU ကွန်ယက်နဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ပါက Facebook မှတိုက်ရိုက် cockpit ကနေ Stream Live မှ
နောက်တစ်ခု: conferencing & လွှအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Unshackling Mocap: မဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြိုးမဲ့ Go" ။ http://www.broadcastbeat.com/unshackling-mocap-go-wireless-in-any-environment/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။